Doorashooyinka Duqa Magaalada London & Golaha Baarlamaanka London wuxuu dhacayaa maalinta Khamiista 5 Maajo 2016.
Qaabka noocan gaarka ah ee xukuumadda degaanka waxay matalaysaa danaha magaalada London iyo dadka reer London. Duqa Magaalada London wuxuu maamulaa magaaladaada, xaga siyaasadda iyo guriyaynta ilaa deegaanka iyo gaadiidka. Golaha Baarlamaanku magaaladu wuxuu kula xisaabtamayaa Duqa Magaalada ayagoo ku matalaya.
Yaa codayn kara
Waad codayn kartaa haddii aad:
Jirto 18 ama ka wayn 5 Maajo 2016
tahay British, EU ama muwaadin u qalma ee Barwaaqa-sooranka – Commonwealth
u diiwaangashan tahay codayn ugu dambayn 18 Abriil 2016.
Waxaad iska diiwaangelin kartaa inaad codayso www.gov.uk/register-to-vote ama la xiriir dawladdaada hoose.
Yaad u codayn kartaa
Waxaad haysataa saddex cod doorashadaan:
mid Duqa Magaalada London
mid qofka aad u doonayso guud ahaan inuu u matalo London Golaha Baarlamaanka London
Mid qofka ama xisbiga aad u doonayso inuu u matalo degaankaaga Golaha Baarlamaanka London
Waxaa jira saddex qaab oo aad u codayn karto.
Goobtaada codaynta laga bilaabo 7am ilaa 10pm ee 5 Maajo 2016
Isticmaasho qof ku matalo. Tani waa inaad u sheegayso qof inuu kuu codeeyo, isagoo ku matalaya, ee xulashada musharaxaaga ama xisbigaaga.
Waraaqaha codayntu Waxay ku qoran yihiin Af-Ingiriisi. Hase yeeshee, waxaa jiri doona , ku hagid Af-Soomaali ee goobta codaynta. Haddii aad doonayso, waxaad u soo kaxaysan kartaa qof goobta codaynta si uu kuu caawiyo. Waa inaad oggolaansho uga heshaa shaqaalaha goobta codaynta inaad samayso arrintan. Qofka kula socda waa inuu ahaadaa xubin qoyskaaga aadka kuugu dhow ama qof u qalma inuu codeeyo doorashadan.
Haddii aad doonayso codsiga ku codayn boosto ahaan ama qof ku matala, waa inaad ka codsataa dawladda hoose ee degaankaaga. Waqtiga ugu dambeeya ee codsiga boosto ku codaynta waa 19 Abriil. Waqtiga ugu dambeeya ee codsiga qof ku matala codaynta waa 26 Abriil.
Soo degso macluumaad-sidahanaga si aad wax badan u ogaato.
Somali voter information leaflet
Somali voter information poster